Enwere mkpa siri ike inye SNF ọtụtụ ihe, ọ bụghị naanị n'ihe gbasara akụrụngwa nchedo onwe onye, ​​kamakwa nnukwu ihe mgbochi ọrịa na ndị ọrụ.
Kemgbe mmalite nke ọrịa SARS-CoV-2 / COVID-19 na United States, anyị amatala na ọ dị mfe ụfọdụ ndị ọrịa. Na mbido, ụlọ ọrụ ndị nọọsụ nwere ọkaibe na ụlọ ọrụ ndị ọzọ na-elekọta ogologo oge bidoro igosipụta ikike maka mbufe ọrịa nje.
Site na mmachi mgbochi ọrịa na - egbochi ndị ọrịa na - adịghị ike ma ndị ọrụ na - agbatị nkịtị, gburugburu ndị a gosipụtara nkwa maka ọrịa ahụ ijide. Ọ bụ ezie na anyị maara na nke a agaghị enwe isi ike, mmadụ ole butere ọrịa n'ezie? N'ụbọchị mmalite nke ntiwapụ ahụ, a na-anwale naanị ndị nwere mgbaàmà, mana ka ihe onwunwe abawanye, ya mere enwere nnwale ule. Nnyocha ọhụrụ sitere na erslọ Ọrụ Maka Nchịkwa na Mgbochi Ọrịa na Mkpụrụ Obi Kwa Izu (MMWR) tụlere njupụta nke COVID-19 na ụlọ ọrụ nọọsụ Detroit (SNFs) site na Machị ruo Mee nke afọ a.
N'iji nyocha nyocha zuru oke nke a nwalere ndị ọrụ niile na ndị bi na ya n'agbanyeghị agbanyeghị mgbaàmà, ha hụrụ ọnụ ọgụgụ na-echegbu onwe ha nke ukwuu na iri abụọ na isii nke Detroit's SNFs. Ule mere gafee otutu akụrụngwa dabere na prioritization na e mere na njikọ na obodo ike ngalaba. Ọzọkwa, ndị nchọpụta mere onsite ọrịa mgbochi nnwale na consultations— “Abụọ ndị na-elu IPC nnwale e duziri maka 12 ụlọ ọrụ na-ekere òkè nke abụọ nnyocha e mere na gụnyere nnyocha nke cohorting omume iji ihe owuwu floorplan, ọkọnọ na ojiji nke onye na-echebe akụrụngwa, aka omume ịdị ọcha, nhazi mgbochi mkpara ndị ọrụ, na ọrụ IPC ndị ọzọ. ”
Ngalaba ahụike mpaghara nyere aka na nchịkọta ozi gbasara nsonaazụ ọma, ọnọdụ mgbaàmà, ụlọ ọgwụ na ọnwụ. N'ikpeazụ, ndị na-eme nchọpụta chọpụtara na site na March 7 ruo May 8, 44% nke ndị bi na 2,773 Detroit SNF dị mma maka ndị SARS-CoV-2 / COVID-19. Oge etiti afọ maka ndị bi na nke ọma bụ afọ 72 na 37% mechara chọọ ụlọ ọgwụ. O di nwute, 24% nke ndi nwalere nke oma, nwuru. Ndị edemede ahụ kwuru na "N'ime ndị ọrịa 566 COVID-19 bụ ndị kọọrọ ihe mgbaàmà, 227 (40%) nwụrụ n'ime ụbọchị 21 nke ule, ma e jiri ya tụnyere 25 (5%) n'etiti ndị ọrịa 461 bụ ndị na-ekwughị ihe mgbaàmà ọ bụla; Ọnwụ 35 (19%) nwụrụ n'etiti ndị ọrịa 180 bụ ndị amaghị ọnọdụ mgbaàmà ha. ”
N'ime ụlọ ọrụ 12 bụ ndị sonyere na nyocha nke abụọ gbasara njedebe, mmadụ asatọ kwadoro ịkọ ndị ọrịa dị mma na mpaghara ndị raara onwe ha nye tupu nyocha ahụ. Ọtụtụ ụlọ ọrụ nwere ọnụ ọgụgụ ndị ọrịa 80 na ndị a nwalere n'oge nyocha nke abụọ, 18% nwere nsonaazụ ọma ma amabeghị na ha dị mma. Dika ndi dere ya kwuru, ihe omumu a gosiputara odidi nke ndi oria a na oke agha. N'ime ndị 26 SNF ahụ, enwere mwakpo zuru oke nke 44% na ọnụego ụlọ ọgwụ metụtara COVID-19 nke 37%. Ọnụọgụgụ ndị a na-eju anya ma na-arụtụ aka maka mkpa a na-aga n'ihu maka nchọpụta n'oge, mgbochi mgbochi ọrịa, ịkọkọ ọnụ, yana mmekorita ya na ngalaba ngalaba ahụike ọha na eze. Enwere mkpa siri ike inye SNF ọtụtụ ihe, ọ bụghị naanị n'ihe gbasara akụrụngwa nchedo onwe onye, ​​kamakwa nnukwu ihe mgbochi ọrịa na ndị ọrụ. Ebe ndị a bụ gburugburu na-adịghị ike, nkwado ga-adị mkpa ọ bụghị naanị oge oge ọrịa ahụ na-efe kama ọfụma.